Daawo: Wasiir beyle oo booqasho lama filaan ah ku tagay dekedda weyn ee muqdisho muxuuse kala kulmay halkaasi? | Kismaayo24 News Agency
Tuesday May 23, 2017 - 11:38 under Somali News by Tifaftiraha K24
Wasiirka Maaliyadda XFS mudane Cabdiraxman Ducaale Bayle ayaa saaka kulan looga hadlayo kor u qaadida tayada shaqo ee Wasaaradda layeeshay agaasimayaasha Waaxyaha, waxaana kulan ku wehliyey Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Prof. Cabdullahi Sheikh Cali Qaloocow iyo Xoghayaha Joogtada ah Ahmed Dayib Nuur.
Shirk ayaa looga hadlay sidii sare looga qaadi lahaa dakhli kordhinta, iyo in dib u eegis lagu sameeyo canshuur dhaafka loo sameeyo Hay’adaha ka howlgala dalka, waxaa sidoo kale wasiirku ku booriyey shaqaalaha dekedda in shaqadooda ay laba jibaaraan islamarkaana la sameeyo qayb shaqaalaha ka mid ah oo dekedda ka howl gala habeenkii xiliyadda ay jiraan shaqooyinka dajinta badeecooyinku.
Wasiirka ayaa sheegay in Wasaaradda ay ka shaqeeyaan shaqaale aad u faro badan loona baahan yahay in dib u eegis lagu sameeyo ku salaysan dhanka aqoontooda iyo in ay si joogta ah u yimaadaan shaqadda.
“Shaqaalaha xuquuqdooda dowladdu xil weyn ayeey iska saartay, waxaana lagama maarmaan ah in ay soo xaadiraan shaqadd xiliga lagu heshiiyey. Hadii uu jiro shaqaale fasax u baahan iyo mid arrimo kale shaqada uga maqnaanaya waxaa lagama maarmaan ah in loo eego sharci ahaan waxa u xaqa u leeyahay, waana in meesha laga saaro shaqaalahaan xiligay doonaan iska safraya” ayuu yiri Wasiir Bayle.
Ugu danbayntii Wasiirka ayaa sheegay in kulankaan uu noqon doono mid joogta ah oo dhaca usbuuc kasta, loogana gol leeyahay dar dargalinta shaqada wasaaradda iyo kobcinta dakhliga u soo xarooda dowladda.